Fampivoarana ny fiambenana ny fonja 20 miliara Ar ny fanampiana azon’i Madagasikara
Omaly 4 jona tetsy Antaninarenina no nanomezan’ny Masoivoho Frantsay ho amin’ny Fampandrosoana (AFD) ny famatsiam-bola mitentina 20 miliara Ar ho an’ny governemanta Malagasy.
Fanivaivana mpitandro filaminana Naiditra am-ponja ilay mpiasam-panjakana mamo
Tsy hisafidianana tavan’olona na sarangan’olona ny fampiharana ny lalàna eto amin’ny tany sy fanjakana. Nisy lehibe-na sampandraharaham-panjakana iray miasa any Ihosy fa kosa mipetraka Ambila avaratra
Halatr’omby tao Ihosy Dahalo telolahy no azo sambo-belona
Omby miisa 27 no tafaverina amin’ny tompony, ny 01 kosa maty tamin'ireo omby 53 very tao amin'ny kaominina ambanivohitra Analaliry distrikan’ Ihosy ny faran'ny volana may lasa teo.
Ady amin’ny zava-mahadomelina Olona 13 naiditra am-ponja tao anatin’ny telo volana
Nanao tatitra mikasika ny asa vitany tao anatin’ny telo volana izany hoe : nanomboka ny volana mmartsa ka hatramin’ny volana may teo ny sampan-draharaha misahana ny ady amin’ny zava-mahadomelina etsy Anosy.
Ambovombe Androy Tafaverina ireo omby 285, dahalo miisa 3 no lavo
Ny marainan'ny 01 jona lasa teo dia nisy andian-dahalo an-jatony tonga nanafika sy nangalatr’omby tao Ambohimalaza sy Ambitiky ary Sarisambo, samy any amin’ny distrikan’Ambovombe Androy.
Loza sy halatra nandritra ny fety Olona dimy no naratra, razana iray no hita
Nanao tatitra mikasika ny asa niantsorohany nandritra ny fankalazana ny fetin’ny pentekosta teo ny polisim-pirenena omaly ho an’ny teto Antananarivo renivohitra.
Toamasina Tratra ireo saika hamaky tranom-barotra
Lehilahy miisa telo saika hamaky tranom-barotra ana lehibe an’ny tera-tany vahiny iray ao Mangarano no voasambotry ny polisy miasa ao amin’ny boriborintany voalohany Toamasina ny 28 mey lasa teo.
rehefa avy nokarohina nandritra ny fotoana maharitra noho ny antony fanendahana. Matetika misy olona voaendakaeny amin’ny faritra manodidina ny Amboatavo Itaosy eny. Anisan’ireo efa nandefasan’ny Tribonaly didy fampisamborana ity tovolahy voasambotra ity. Vehivavy iray izay efa nendahiny volana vitsy ihany no nifanena taminy teo Amboatavo Itaosy ny alatsinainy io tokony ho tamin’ny 10 ora maraina ka niantso polisy avy hatrany. Vao nahita ny polisy nanatona azy ity tovolahy ity dia nandositra, raikitra ny fifanenjehana ka voasambotra tsy lavitra teo izy. Nandritra ny fanadihadiana azy dia niaiky izy fa efa an-taonany maro izy no nanendaka teny amin’ny faritra Itaosy ary efa any am-ponja ny namany sasany. Voalazany fa finday sy vola no tena alainy rehefa manendaka izy.